Imaltoonni bidiruu galaana Paasifiik ji'a shan erga karaa irraa badanii joonja'aa turanii booda baraaraman. - BBC News Afaan Oromoo
Imaltoonni bidiruu galaana Paasifiik ji'a shan erga karaa irraa badanii joonja'aa turanii booda baraaraman.
Goodayyaa suuraa Dubartoota lama - saree isaanii waliin
Abbootii qabeenyaa bidiruu fi deemsa gaalaana irraa kan jaalatan dubartoonni lamaa fi sarootni isaanii Humna Waraana Galaanaa Ameerikaan (US Navy'n) kan baraaraman naannoo ji'a shaniif daandii irraa baduun erga joonja'aa turanii boooda ta'u isaa, angaawonni dubbatan.
Jeenifar Apeel fi Taashaa Fuyiibaa, Haawaay irraa gara Taahitti bidiruu xiqqoo tokkoon imala kan jalqaban wayita ta'u, haalli qilleensa haammaachuu irraa kan ka'e ture motorri bidiruu isaanii hojii isaa kan dhaabe.
Kana boodas galaana gara kibba-baha Jaappaan irraa KM 1,500 keessa jooraa turte.
Kan balaa kanarraa baraaramuu danda'anis erga qurxummii qabdoonni bidiruu arganii angaawoota Ameerikaatti beeksisanii booda ture.
Dubartoonni lamaan ji'a Eblaa keessa imala isaanii jalqaban kun, dursa qilleensaa fi sharaa bidiruu irratti dhifamuun gargaaramuun gara lafaatti ni baana jedhanii yaadaa turan, jechuun humni galaana Ameerika ibseera.
''Imala kana erga jalqabanii ji'a lama boodaa, Tahiitii geenya jedhanii yeroon isaan itti tilmaaman guyyoonni baay'een erga darbanii booda, gargaarsaaf wamiicha ijibbaataa gochuu egalan," jechuun dabalataan ibsaniiru.
Itti fufuunis dubartoonni kun guyya guyyaatti waamicha ijibbaataa kana gochaa kan turan ta'ullee, dooniiwwan biroottis ta'e qarqara bishaanitti dhihoo waan hin turreef dhagahamuu hin dandeenye, jechuun humni galaana Ameerikaa himeera.
Goodayyaa suuraa Dubartoonni kun saroota isaani waliin ji'a Eblaa keessa Haawaay irraa karaa jalqaban
Goodayyaa suuraa Jeenifeer Apeel ajajaa olaanaa doonii humna galaana Ameerikaa Gaarii Wisiin gara dooniisanitti wayita simatamtu
Onk. 24, dooniin qurxummii qabdoota Taayiwaan bidiruu galaana irra asiif achi joortu fagootti arguun angaawoota daangaa Ameerikaa kan Guwaam jirutti beeksisan.
Humni waraanaa galaana Ameerikaas borumtii isaa obboroodhaan qaqqabuun, saroota isaanii dabalatee dubartoota magaalaa Honoluuluu Haawaay lamaan baraaruu danda'eera.
Goodayyaa suuraa Humni waraanaa galaana Ameerikaa kan dhufee baraare, qurxummii qabdootan argamanii borumtaa isaa ture
''Lubbu keenya nu oolchan,'' jeti aadde Apeel, itti dabaluunnis,''wayita humna galaana Ameerikaa fagootti argine guddaa gamanne, ni boonne, akkasumas haara-galfii guddaatu nutti dhagahame,'' Jette.
Namoonni kun yeroo qorumsaa dheeraa kana keessa lubbuun turuf kan gargaare meeshaa bishaan calaluu fi kuusaa nyaata goggoogaa baay'inaan keessa kaanii ta'uun isaas beekameera.
Kaanadaan du'a ogeeyyii fayyaan deeggarame babal'isuufi